बालबालिकालाई संक्रमणबाट ‘जोगाउन’ पूर्वतयारी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
बालबालिकालाई संक्रमणबाट ‘जोगाउन’ पूर्वतयारी
जेष्ठ ३१, २०७८ नगेन्द्र अधिकारी
काभ्रे — कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुने प्रक्षेपणका आधारमा काभ्रेमा त्यसविरुद्धको पूर्वतयारी थालिएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले धुलिखेल अस्पताल, शिर मेमोरियल अस्पताल र मेथिनकोट अस्पताललगायतलाई बालबालिकाका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपणका आधारमा तयारी थालेका हौं,’ केन्द्र संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलेले भने ।
सोहीअनुसार यहाँका अस्पतालहरूले पनि तयारी थालेको बताएका छन् । धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. अनिश जोशीले सरकारी निर्णयको आधारमा बेड, उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । ‘सरकारले २० प्रतिशत बेड व्यवस्था गर्नेलगायतका अन्य तयारीका लागि भनेको छ, हामीले पनि सोहीअनुसार तयारी गरेका छौं,’ डा. जोशीले भने, ‘यद्यपि भनिएजस्तो आत्तिनुपर्ने स्थिति भने छैन ।’ उनले पेडियाट्रिक आईसीयू र निओनटल आईसीयूमा बेड तथा जनशक्ति र उपकरणहरू थपिएको जानकारी दिए ।
डा. जोशीले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसको चित्तबुझ्दो आधार भने नभएको तर्क गरे । ‘भाइरसले उमेर समूह तोकेर आक्रमण गर्ने होइन, यसअघिका लहरमा पनि बालबालिकामा संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा कम नै छ,’ उनले भने, ‘खोप नलगाएको कारण बालबालिकामा बढी संक्रमण हुन्छ भनिएको हुन सक्छ तर नेपालमा धेरै वयस्कहरूले पनि खोप लगाएका छैनन् ।
भीडभाड गर्ने, घुलमिल हुने समूह पनि वयस्क नै भएकाले उनीहरू पनि उत्तिकै जोखिममा छन् ।’ पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा सबै उमेर समूहमा संक्रमण दर उच्च भएकाले बालबालिकामा पनि सो दर बढ्ने सक्ने उनले अनुमान गरे ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०९:५१
सेभिया — तीनपल्टको युरोपेली च्याम्पियन स्पेन अब त्यस्तो फुटबल शक्ति रहेन, जुन केही वर्षअगाडि रहेको थियो । सन् २००८ देखि २०१२ बीच स्पेनले लगभग सबै जितेको थियो ।
तस्बिर : स्पेन फुटबल संघ
अहिले त्यो पुस्ताका खेलाडी हराइसके । अब नयाँ अनुहारले टिममा प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसैले स्पेनले युरो २०२० मा सोमबार स्विडेनको सामना गर्दा एउटा नयाँ युग सुरु गर्न चाहन्छ । पछिल्ला केही वर्ष स्पेनका लागि खासै सुखद रहेन ।
यो टिम पछिल्ला तीन ठूला प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल पार गर्न असफल रहेको छ । प्रशिक्षक लुइस एनरिकले यसैबीच विवादास्पद तरिकाले टिमबाट सर्जियो रामोसलाई हराएका छन्, उनको खराब फिटनेसलाई कारण देखाए । लामो समयपछि स्पेन रामोसबिना ठूलो प्रतियोगिता खेलिरहेको छ । त्यसको ठीक विपरीत टिममा नयाँ युवा खेलाडी छन्, जसलाई स्पेनी फुटबलको भविष्य भन्न सकिन्छ, जस्तो फेरान टोरेस । जर्मनीलाई नेसन्स लिगमा ६ गोलले हराएका बेला उनले ह्याट्रिक गरेका थिए ।
यो खेल बिल्बाओमा हुनुपर्ने थियो, तर कोरोना भाइरस संक्रमणबीच सेभियामा सारियो । स्पेनले लिग चरणका सबै खेल यहीं खेल्नेछ । यहीं उसको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी बलियो स्विडन रहेको छ । संयोगले यो टिममा पनि सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी रहेका छैनन् चोटका कारण ज्लाटन इब्राहिमोभिच टिममा छैनन् । स्विडेन आफै पनि नयाँ पुस्ताका खेलाडीमा निर्भर हुनेक्रममा छ । एलेक्जान्डर इसाक र जोर्डन लारासन त्यस्ता दुई युवा खेलाडी हुन्, जसले स्पेनमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग– युरो २०२० को ठीकअगाडि पोल्यान्डले एक प्रकारले लय गुमाएको छ । त्यसैले पोल्यान्डले समूह ‘ई’ को आफ्नो पहिलो खेलमा स्लोभाकियाको सामना गर्दा दबाबमा रहनेछ । स्लोभाकिया आफै उसका लागि बलियो विपक्षी टिम नहुनु सक्छ, तर दबाब चर्को छ । युरोअगाडि पोल्यान्डले कमजोर एन्डोरालाई हराउन पनि कडा संघर्ष गर्नुपरेको थियो । पोलिस प्रशिक्षक पाउलो सौसाले पनि मानेका छन्, आफू एक प्रकारले तनावमा छु भनेर ।
पोल्यान्ड टिमका मुख्य खेलाडी निर्विवाद रूपमा रोबर्ट लेवान्डोस्की रहेका छन् । पूरा टिम उनकै वरिपरि घुम्ने गरेको छ । पछिल्लो समय कम्तीमा उनी आफै भने लयमा छन् । स्लोभाकिया आफै पनि निकै उतारचढावपूर्ण लयबाट गुज्रिरहेको टिम छ । त्यसैले उसले पछिल्ला १३ खेलमध्ये दुईमा मात्र जित निकाल्न सकेको छ । यस्तोमा पोल्यान्डले जित निकाल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, तर स्लोभाकियाले कडा चुनौती पेस गर्ने तय छ ।
स्कटल्यान्डविरुद्ध चेक गणतन्त्र
ग्लास्गो– स्कटल्यान्डले सोमबार युरो २०२० को आफ्नो पहिलो खेलमा चेक गणतन्त्रको सामना गर्नेछ । त्यसअगाडि व्यवस्थापक स्टिभ क्लार्कले टिमको ‘जायन्ट किलर’ को पुरानो छवि कायम राख्न चाहेको बताएका छन् । स्कटल्यान्ड २३ वर्षयता पहिलोपल्ट कुनै ठूलो प्रतियोगिता खेल्दै छ । कुनै समय ठूला प्रतियोगिता नियमित खेल्ने गरेको स्कटल्यान्डले यसपल्ट भने प्लेअफको बाटो भएर युरोमा छनोट भएको हो । इतिहास पल्टाउने हो भने स्कटल्यान्डले नेदरल्यान्ड्स र स्पेनजस्ता टिमलाई हराएको छ ।
यही स्कटल्यान्डले सन् १९९९ मा अन्तिम पटक इंग्ल्यान्डलाई हराएको थियो । अहिले स्कटिस टिमका कप्तान छन्, लिभरपुलका एन्डी रोबर्टसन । व्यवस्थापक क्लार्कले भनेका छन्, ‘केही वर्षअगाडि स्कटल्यान्डले जसरी खेल्ने गर्थ्यो, फेरि त्यस्तै खेल्ने रणनीति छ । हामी ठूला टिममाथि स्तब्धपूर्ण नतिजा निकाल्न सक्षम छौं । विश्वास गरौं, यसपल्टको प्रतियोगिता यस्तै हुनेछ ।’ चेकविरुद्धका पछिल्ला तीन खेलमा स्कटल्यान्ड विजयी रहेको छ । त्यसैले समूह ‘डी’ को खेलअगाडि स्कटल्यान्ड निकै उत्साहित रहनेछ ।
आयमेरिक लापोर्ट (स्पेन)
पछिल्लो तीन सिजनको तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्व फुटबलका सबैभन्दा स्तरीय सेन्टर ब्याक हुन् आयमेरिक लापोर्ट । उच्च लयमा हुँदाहुँदै पनि फ्रान्सेली टिमबाट पटक पटक बेवास्ता भएपछि उनले राष्ट्रियता परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दै पुगे स्पेन ।
इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीका यी पर्खालले युरो २०२० को केही समयअघि मात्र स्पेनबाट खेल्न पाउने योग्यता पाएका थिए । प्रशिक्षक लुइस इनरिक स्पेनिस सरकारको त्यही निर्णयको पर्खाइमा थिए । किनभने खराब लय र चोटग्रस्त कप्तान सर्जियो रामोसको भूमिकालाई न्याय गर्न सक्ने लापोर्टमात्र थिए । चतुर्‍याइँपूर्ण ट्याकल र हेडरमा अब्बल लापोर्टले लामो पासमा पनि दक्षता राख्छन् । २७ वर्षीय लापोर्टले क्लबस्तरमा स्पेनिस प्रशिक्षकलाई निकै प्रभावित पारेका छन् । राष्ट्रिय टोलीबाट उनको परीक्षण हुन बाँकी छ ।
कोरोना महामारीका कारण बालोन डी’अर रद्द नभएको भए बायर्न म्युनिकका स्ट्राइकर लेवान्डोस्की निश्चित रूपमा त्यो उपाधिका हकदार हुन्थे । उनी विश्व फुटबलकै मुख्स स्टार हुन् । सन् २०१९/२० को सिजनमा बायर्नका लागि लेवान्डोस्कीले ४७ खेलमा ५५ गोलको सानदार प्रदर्शन गरे । एक क्यालेन्डर वर्षमा यो तथ्यांक अहिलेसम्म क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसीले मात्र हासिल गर्न सकेका थिए ।
२०२०/२१ को सिजनमा विगतभन्दा कम गोल गरे पनि उनले एकै सिजन ४० गोल गर्ने गर्ड मुलरको कीर्तिमान तोडे । यो सफलता उनले २९ खेलमा पाएका हुन् । आधुनिक फुटबलको पछिल्ला वर्षमा उनलाई उत्कृष्ट ‘नम्बर नाइन’ स्ट्राइकर मानिन्छ । लेवान्डोस्कीले देशका लागि भने अहिलेसम्म उच्च सफलता पाएका छैनन् । उनकै प्रदर्शनमा युरोको अघिल्लो संस्करणमा पोल्यान्ड क्वाटरफाइनल पुगेको थियो । चौथोपल्ट युरो खेल्न लागेको पोल्यान्डको त्यो नै उत्कृष्ट नतिजा हो । ३२ वर्षीय लेवान्डोस्कीले पोल्यान्डबाट १ सय १९ खेलमा ६६ गोल गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०९:०१